स्वास्थ्यकर्मीले पाएनन् जोखिमभत्ता, केन्द्रसँग हारगुहार गर्दै प्रदेश सरकार
- अनुप पौडेल
कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न गण्डकी प्रदेशमा अहिले एउटा मात्रै अस्पताल छ । पोखरा–२६ मोहरियास्थित संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी अन्य बिरामीसँगै कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएका छन् ।
२१ माघमा कोरोना पुष्टि भएपछि प्रदेशकी सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुन सरुवा रोग अस्पतालमा १५ दिन बसेकी थिइन् । मन्त्रालयका सचिव विनोद कुँवर पनि सोही अस्पताल बसेका थिए । आफैँ पनि संक्रमित हुने डरका बीच उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी सरकारसँग रुष्ट छन् ।
चार सयभन्दा बढी कोरोना संक्रमितको उपचार गरेको यो अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । ‘कोरोना संक्रमित राख्ने गरी सरकारी अस्पताल बनाउनेभन्दा केही साथीले जागिर नै छोड्नुभयो । पेसा नै यही हो । डराएर छोड्नुभएन’, एक स्वास्थ्यकर्मीले भनिन्, ‘काम गरेकै छौँ । तर, दिने भनेको जोखिम भत्ता आएन ।’
अस्पतालका कार्यकारी निर्देशकलाई आफूहरूले पटकपटक भने पनि त्यसको प्रतिफल नदेखिएको उनको गुनासो छ । ‘तलबचाहिँ नियमित आइरहेको छ । जोखिम भत्ता भनेर अहिलेसम्म एकपटक पनि पाएको छैन । यहाँ सरलाई भनेको हो, तर आएको छैन’, ती स्वास्थ्यकर्मीले सुनाइन् ।
अस्पतालमा डाक्टर, नर्स र अन्य कर्मचारीसहित ४० जना कर्मचारी छन् । कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न कन्सल्टेन्ट र मेडिकल अफिसर एक/एक जना, नर्स दुई जना र सहयोगी एक जना छन् ।
अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. विकास गौचनका अनुसार जोखिम भत्ता व्यवस्थापन गरिदिन सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग अनुरोध गरिएको छ । तर, प्रदेशमा जोखिम भत्ताका लागि छुट्टै बजेट नहुँदा समस्या भएको उनले बताए ।
‘कोरोनाको उपचार, नियन्त्रणलाई आवश्यक मेडिकल औजार किन्न प्रदेशमा बजेट रहेछ । तर, भत्ताका लागि छुट्टै बजेट नहुँदा प्रदेश सरकारलाई पनि नीतिगत अप्ठेरो परेको सुनियो’, उनले भने, ‘मन्त्रालयका अधिकारीले केन्द्रमा भन्नुभएको छ । जोखिम भत्ताका लागि पहल भइरहेको छ ।’
प्रदेश सरकारले लायन्स सामुदायिक अस्पताललाई गत साउनमा संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल घोषणा गरेको थियो । मोफसलकै पहिलो सरुवा रोग अस्पताल बनाएको र संक्रमितको उपचारमा लागेको भनेर प्रदेश सरकारको प्रशंसा पाएकाे थियाे ।
तर, पहिलो दुई महिना कर्मचारीलाई तलब नै दिन ढिलाइ गरेपछि प्रदेश सरकारले आलोचना पनि खेप्नुपर्‍यो । पछि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई अस्थायी दरबन्दीका रूपमा स्वीकृति दिएको थियो ।
जिल्लामा पाँच करोड २७ लाख भत्ता
प्रदेशभित्रकै अरु अस्पतालले पनि गत असारसम्म मात्रै जाखिम भत्ता पाएका छन् । भदौदेखि कात्तिकसम्म कोरोना संक्रमण उच्च जोखिममा रहँदा खटिएका उनीहरूले पनि जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । सरकारले बनाएको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेशमा असारसम्म वा कोरोना नियन्त्रणमध्ये जुन पहिला हुन्छ त्यहीअनुसार हुने व्यवस्था छ ।
त्यही व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयका कर्मचारीसहित जिल्ला अस्पताल र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जोखिम भत्ताबापत पाँच करोड २७ लाख रुपैयाँ बुझेका छन् ।
असारपछि भने उनीहरूले पनि जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । केन्द्र सरकारले प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय हुँदै जिल्लामा जोखिम भत्ता पठाएको थियो । यसरी जोखिम भत्ता पाउनेमा स्वास्थ्यसम्बद्ध २५ वटा कार्यालय छन् ।
सबैभन्दा बढी धौलागिरी अञ्चल अस्पताललाई ९१ लाख १३ हजार रुपैयाँ पठाइएको मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी सुशीला आचार्यले जानकारी दिइन् । सबैभन्दा कम मनाङ, मुस्ताङका जिल्ला अस्पताल र स्वास्थ्य कार्यालयका स्वास्थ्यकर्मीले एक/एक लाख रुपैयाँ बुझेका छन् ।
आफ्नै कर्मचारीलाई भत्ता दिन केन्द्रसँग हारगुहार
कोरोना जोखिम बढेपछि उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले जोखिम भत्ताको व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्था चैतदेखि असारसम्मलाई थियो । तत्कालीन लायन्स सामुदायिक अस्पताललाई गण्डकी प्रदेश सरकारले साउनमा संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल बनायो ।
१ महिनापछि त्यहाँ लक्षण नभएका कोरोना संक्रमितको उपचार सुरु भयो । कोरोना उच्च बिन्दुमा हुँदा त्यहाँका कर्मचारी संक्रमितको उपचारमा खटिए । गण्डकी प्रदेशकी सामाजिक विकासमन्त्री पुन २१ माघमा कोरोना पुष्टि भएपछि सरुवा रोग अस्पतालमा १५ दिन बसेकी थिइन् ।
सोही मन्त्रालयका सचिव कुँवर पनि २४ माघमा काेराेना पोजिटिभ भएपछि १ हप्ता त्यहाँ उपचार गरेर होम आइसोलेसनमा फर्किए । तर, कर्मचारीले जोखिम भत्ता नपाएकोबारे जानकार मन्त्री र सचिव पहल गर्न कुनै तदारुकता देखाएनन् ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि फ्रन्टलाइनरको मनोबल नगिराउने बताउँदै आएका थिए । तर, प्रदेश सरकार आफ्नै अस्पतालका कर्मचारीलाई जोखिम उठाएबापत सुविधा दिन केन्द्र सरकारको मुख ताकिरहेको छ ।
गत २५ माघदेखि मातृशिशु अस्पताल बाटुलेचौरका स्वास्थ्यकर्मी जोखिम भत्ता माग्दै आन्दोलनमा उत्रिए । उनीहरू आन्दोलनमा रहँदा सामाजिक विकास मन्त्री पुन र सचिव कुँवर आइसोलेसनमा थिए । त्यो बेला मन्त्रालयमा एक/दुई जना कर्मचारी मात्रै आउँथे । स्वास्थ्यकर्मीले सेवा नै ठप्प पारेपछि मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले मन्त्री र सचिव कोरोनामुक्त भएपछि जोखिम भत्ता व्यवस्थापन गरिने आश्वासन दिए ।
मातृशिशु अस्पताल व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष उषा बरुवालले आन्दोलन रोकिए पनि भत्ता नआएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘माग भएबमोजिम दिन मिल्ने/नमिल्ने, अरु जिल्लामा कसरी पठाइएको छ, त्यो हेरेर दिने भनेर प्रक्रिया सुरु गर्नुभएको छ ।’ मातृशिशु अस्पतालमा ७० जना हाराहारीमा कर्मचारी छन् ।
मन्त्रालय भन्छ- केन्द्रसँग मागेका छौँ
स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो गरिरहँदा सामाजिक विकास मन्त्रालयले केन्द्र सरकारसँग माग गरे पनि रकम निकासा नभएको बताएको छ । मन्त्रालयको अस्पताल विकास महाशाखा प्रमुख डा. रामबहादुर केसीले सरुवा रोग अस्पतालबाट जोखिम भत्ता मागको पत्र प्राप्त भएको र त्यसलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाइएको बताए ।
‘जोखिम भत्ता माथि (केन्द्र सरकार) बाट आएपछि जिल्लामा बाँडेका हौँ । अस्पतालबाट आएको सबै निवेदन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाएका छौँ,’ उनले भने, ‘माथिबाट पैसा आएको छैन । जोखिम भत्ता हामीले दिने होइन ।’ प्रदेश सरकारले आइसोलेसन निर्माण, परीक्षण पूर्वाधार, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा खर्च गरेको डा. केसीले बताए ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत १८, २०७७, १६:४४:००
कोभिडविरुद्धको लडाइँमा निजी क्षेत्रबाट भएका प्रशंसनीय काम, कसले के गरिरहेको छ ? कोभिडविरुद्धको लडाइँमा निजी क्षेत्रबाट भएका प्रशंसनीय काम, कसले के गरिरहेको छ ?6min read
खिमलाल देवकोटाले उम्मेदवारी फिर्ता नलिने खिमलाल देवकोटाले उम्मेदवारी फिर्ता नलिने2min read
मनको सुनसान खण्डहर मनको सुनसान खण्डहर2min read
सांसदहरूलाई कोरोनाविरुद्धको खोपको दोस्रो डोज लगाउन सुरु2min read
पिसाब फेर्न निस्किएका चौधरी मृत भेटिए 1 min read
बामदेव गौतम भन्छन्- ओली-नेपाल सम्बन्ध महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा स्थापित होस् 1 min read
कोभिडविरुद्धको लडाइँमा निजी क्षेत्रबाट भएका प्रशंसनीय काम, कसले के गरिरहेको छ ?6min read
दाङमा एकै दिन छ जना सङ्क्रमितको मृत्यु2min read
वंश बाबुको मात्र होइन, आमाको पनि हुन्छ, तर मेरो अस्तित्व खोइ ? 12 min read